Fibahanana fidirana : ny fatiantoka ara-tsosialy sy ara-toekarena ateraky ny fibahanana ny Twitter ao Nizerià · Global Voices teny Malagasy
Very 250 000$ isaky ny ora iray fampiatoany ny Twitter i Nizerià
Voadika ny 26 Jolay 2021 5:43 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, Español, Français, English
Tanora nizeriàna mifanakalo hevitra momba ny votoatin'ny pejy iray sokafana anaty telefaona avo lenta. Sary an'i James Moore200 tao amin'ny Wikimedia Commons, 27 martsa 2021, nampiasàna lisansa CC BY-SA 4.0.
[Raha tsy asiana fanamarihana manokana, mankany amina pejy amin'ny fiteny anglisy daholo ny rohy ato.]
Maro ireo Nizeriàna no malahelo fatratra ny famoizany an'i Twitter herinandro vitsy taorian'ny nanakatonan'ny governemanta nizeriàna azy. Ankoatry ny fanitsakitsahana mibaribary ny fahalalahana maneho hevitra an-tambajotra ananan'ireo mpampiasa azy, io fampiatoana io dia manohintohina ihany koa an'ireo Nizeriàna amin'ny fampiasan-dry zareo ilay sehatra ho amin'ny tanjona ara-toekarena sy sôsialy.
Ny 4 Jona 2021, nambaran'ny governemanta nizeriàna fa naatony ny asan'ilay sehatra fanoratana bilaogy kiritika ao amin'ny firenena taorian'ny namafàny ny bitsika iray nalefan'ny filoha Muhammadu Buhari. Tao anatin'ilay bitsika, norahon'ny filohampirenena ireo mpitolona mpomba an'i Biafra ao atsimo-atsinanan'ny firenena tsy hamerina ny ady an-trano tao Biafra tamin'ny 1967-1970, izay nahafaty sivily 500.000 hatramin'ny 2 tapitrisa.
“Betsaka amin'ireo hondrankondrafana amin'izao fotoana izao no mbola tanora loatra tsy tonga saina amin'ny faharavàna sy famoizana aina nitranga nandritra ny ady tao Biafra. Ny sasany amintsika izay teny an-tanin'ady nandritra ny 30 volana, izay niaina ny ady, dia amin'ny teny izay hain-dry zareo tsara no itondrantsika azy ireo“, hoy ny nosoratan'i Buhari tao anatin'ilay bitsika izay efa nofafàna.
Nanaovan'ilay sehatra bilaogy kiritika fanamarihana ary nofafàny ilay bitsika, noraisiny ho toy ny fanitsakitsahana ny fepetra napetrany momba ny “fitondrantena tafahoatra”.
Tezitra tamin'io fihetsiky ny Twitter io, valy bontana nataon'ny governemanta ny fandraràna tsy misy fetra noho ny “fampiasàna tsy mitsahatra ilay sehatra ho amin'ireo hetsika mety hanimba ny fisian'ny vondrompiarahamonina nizeriàna”.
Vakio koa : Voasakana ny Twitter ao Nizerià taorian'ny fifanoheran-kevitra nahakasika famafàna ny bitsika iray nalefan'ny filohampirenena nandrahona herisetra [fr]
Ny 5 Jona 2021 no nanomboka nanan-kery ilay fampiatoana. Nangatahan'ny governemanta ireo rehetra mpanome tolotra tambajotra ao amin'ny firenena mba hampiato ny fahafahana miditra amin'ny Twitter.
Fandraràna lafo vidy loatra
Mihoatra ny 120 tapitrisa ireo Nizeriàna no manana fahafahana miditra aterineto, ary manodidina ny 40 tapitrisa amin'ireo no manana kaonty Twitter – izany hoe 20 % amin'ny vahoaka – araka ny lazain'ny kabinetra mpanadihady NOI Polls ao Lagos.
Mamela dindo goavana amin'ny fiainan'ireo marobe mpampias azy ny Twitter, izay tanora ny ankamaroany. Tafiditra tanteraka ho ampahany amin'ny fiainana sôsialin-dry zareo izy ary manohana ny fandraharahàna ataon-dry zareo, ampiasaina ho sehatra fanaovana dokambarotra. Matetika no avoaka ao ireo dokambarotra ho an'ireo fitaovana fampiasa an-tokantrano, fitaovana elektrônika, fitafiana ary fitaovana maro hafa, izay miteraka varotra avy eo. Nanampy olona marobe ny Twtter ho afaka nifandray tamin'ireo mpividy sy mpanjifa izay, raha amin'ny andavanandro, dia tsy ho tratr'antso mihitsy.
“Tsy maintsy tsarovantsika ihany koa fa mihoatra noho ny maha-loharanom-pifandraisana azy no ampiasan'ny ankamaroan'ireo tanorantsika mpiasa ao Nizerià ny Twitter. Lasa loharanom-pitadiavana fivelomana ho an'ny maro izy, tsy misy iankinan'izay fironany pôlitika na ny finoan-dry zareo. Samy amin'ny alàlan'ny fahafahana atolotr'ilay sehatra avokoa no mahita fivelomana ireo tanora sy ireo fikambanana misahana fifandraisana nomerika ao Nizerià, mba hamoahana zavatra ho fantatr'ireo mpanjifa“, hoy ny bitsika iray nalefan'i Seyi Makinde, governoran'ny Fanjakan'i Oyo ao Atsimo-Andrefan'i Nizerià.
NetBlocks, mpnaramaso ny aterineto erantany, dia nilaza tamin'ny BBC fa very teo amin'ny 250.000 dolara amerikàna teo i Nizerià isaky ny ora iray nanakanany ny Twitter. Hatramin'ny nampiatoana ilay tambajotra sôsialy, ireo orinasa salantsalany sy madinika (PME) izay niforona nanodidina ny fisian'ilay sehatra, isan'izany ireo mpanefy hevitry ny media sôsialy, ireo tsy miankina sy ireo tsimok'orinasa, dia nizaka fitontonganana tsy azo notsinontsinoavina tamin'ny asan-dry zareo.
Ankoatry ny fahafahana mitrandraka ara-toekarena, maro ihany koa ireo tombontsoa sôsialy isankarazany atolotr'ilay sehatra ho an'ireo Nizeriàna. Nampiasaina ny Twitter mba hanangonana vola ho an'ireo marary sy olona marefo, mba hamantarana ny toerana misy ireo olona tsy hita ary hiantsoana fiara mpitatitra marary. Ohatra, tamin'ny volana May, Twitter dia nandray anjara tamin'ny famahàna raharaha iray fakàna an-keriny sy famonoana olona iray mpitady asa tany amin'ny atsimon'ny firenena.
Ny fanohanan'ny Twitter an'ireo fihetsiketsehana #EndSARS
Na ivon'ity raharaha fampiatoana ity aza ilay bitsika nofafàna, dia tsy inona io fa ny vely kanonta farany tamin'ilay ady efa naharitra ela teo amin'ny fitantanan'i Buhari sy ny Twitter.
Nandritra ireo hetsipanoherana #EndSARS tamin'ny Oktôbra 2020, ka nandritra izany ireo tanora nizeriàna dia nihetsika nanohitra ny herisetra ataon'ny pôlisy, ny Twitter no teboka fototra nifantohan'ireo mpikarakara sy ireo mpanao hetsipanoherana. Nampiasaina ilay sehatra mba hanamafisana ny fanohanana ilay hetsika, izay nanao adisisika hamongorana ny sampan'ireo mpitily ao anatin'ny pôlisy nizeriàna fantatra amin'ny anarana hoe Andiany Manokana miady amin'ny Asan-Jiolahy (Special Anti-Robbery Squad – SRAS).
Vakio bebe kokoa : Fandrakofana manokan'ny Global Voices — #EndSARS: Hetsika iray ataon'ny tanora ao Nizerià ho fampitsaharana ny herisetran'ny pôlisy (amin'ny fiteny anglisy)
Ny Tale Jeneralin'ny Twitter, Jack Dorsey, dia nanohana ihany koa ireo hetsipanoherana, nanasa ireo mpampiasa ny tambajotra mba hanolotra fanomezana ho an'ilay hetsika. Ankoatra izany dia namoronan'ny Twitter ‘emoji’ vaovao ilay hetsipanoherana.
Nanome fitenenana ho an'ireo tanora nizeriàna ihany koa ny Twitter momba ireo olana sôsialy sy pôlitika mivaivay misy ao amin'ny firenena. Mampiasa ihany koa an'ilay sehatra mba hikarakaràny ireo hetsipanoherana sy hisarihana ny saina ho amin'ireo hetsika ataony ireo mpikatroka mitaky fisintahana toa an'i Nnamdi Kanu sy Sunday Igboho, ary hatramin'ireo mpikatroka toa an'i Omoyele Sowore. Nanozongozona ny governemanta izany, izay avy eo dia nihevitra ny handrindra ireo media sôsialy nanomboka tamin'ny fiandohan'ny fepotoam-piasàny tamin'ny 2015.
Vakio bebe kokoa : volavolan-dalàna ao Nizerià momba ny media sôsialy, hanimba ny fahalalahana maneho hevitra an-tserasera (amin'ny fiteny anglisy)
“Tsy nitsahatra ny Twitter nanome hatrany ny sehatra ho an'ireo manohintohina ny fisian'i Nizerià ; izany no antony nampitsaharana ny asany aty Nizerià“, hoy ny nambaran'ny minisitry ny fampahalalam-baovao, Lai Mohammed, herinandro taorian'ilay fampiatoana.
Valy bontana sy fandrahonana fanenjehana noho ny fandingànana ilay fandraràna
Nandritra izany fotoana izany, niteraka fanontaniana teny anivon'ireo mpisehtra ao an-toerana sy iraisampirenena ilay olana, marobe no nanameloka ny fihetsiky ny governemanta. Ireo iraka diplaomatikan'ny Fiombonambe Eorôpeàna, ny Fanjakana Mitambatra, Etazonia, Irlandy ary Kanadà, dia samy nanamafy tao anaty fanambaràna iray niombonana fa “ny zo fototry ny olona hanana fahalalahana maneho hevitra sy hahazo vaovao no andry iray nijoroan'ny demaokrasia tao Nizerià, toy ny nanerana izao tontolo izao ihany”. Nambaran'ireo diplaomaty ny tsy hafalian-dry zareo manoloana ny fampiatoana ny Twitter, tamin'ny fanamafisana fa “mihatra ireny zo ireny na an-tambajotra na ivelan'ny tambajotra”.
Nomelohan'ny fitantanan'i Biden ihany koa “ilay fampiatoan'ny governemanta nizeriàna manjo ny Twitter amin'izao fotoana izao sy ny fandrahonana mety hisy aoriana hisamborana sy hanenjehana ireo Nizeriàna mpampiasa Twitter”, tao anaty fampitam-baovao iray tamin'ny 10 Jona 2021.
Manditra izany fotoana izany, raha efa naharitra herinandro maro sahady ilay fampiatoana tsy nahitana vahaolana, taorian'ny nanaovan'ireo goavana mpanome tolotra fifandraisandavitra ny fanakanana fahafahana miditra aminy, dia miha-maro ireo Nizeriàna no mahita làlan-kafa hahazoana miditra amin'ny tolotra fanoratana bilaogy kiritika. Marobe ireo mampiasa tambajotra virtoaly manokana (VPN) mba handingànana ilay fibahanana.
Ho setrin'ny fanamby ataon'ireo mpampiasa Twitter, ny governemanta nizeriàna, tamin'ny alàlan'ny minisitry ny fitsaràna, Abubakar Malami, dia nandrahona ny hanenjika ireo olona mampiasa VPN mba hahafahany miditra any amin'ny Twitter.
Niteraka valy bontana ilay fandrahonana nataon'Atoa Malami, marobe ireo mpampiasa nanamafy fa tsy mahalala velively ny fisiana lalàna mandràra ny fampiasàna Twitter. Isan'ireo izay nanoratra ho an'Atoa. Malami ilay minisitra teo aloha nisahana ny fampianarana, Oby Ezekwesili.
Firy amin'ireo Nizeriàna mpiray tanindrazana ao amin'ny @Twitter amin'izao fotoana izao no faly hahita fa ho henjehan'ny @NigeriaGov noho ny nampiharany ny zony nomen'ny lalam-panorenana azy ireo ho afaka miteny sy hanana fikambanana?
Miaraha amiko ianareo ary atsangano ??‍♀️??‍♂️ ampiravoravoana ny tànanareo mba hahafahan'i @MalamiSan mahita malaky antsika sy hitondra antsika eny amin'ny fitsaràna.
Misy ihany koa tatitra sasantsasany milaza fa mifampiraharaha amin'i Shina izao ny governemanta mba hamoronana rindrinafo aterineto hanakanana ireo Nizeriàna tsy ho afaka miditra amin'ny Twitter amin'ny alàlan'ny VPN. Ny rindrinafo shinoa dia mametraka teritery amin'ny fahafahana miditra Google, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram ary sehatra maro hafa tahaka izany ao Shina.
Ao anatin'ny andrana hitadiavany izay hasolo ny Twitter, vinavinain'ny governemanta ny hampiroborobo sehatra iray hafa antsoina hoe “Koo”, fanoratana bilaogy kiritika, ary efa namorona kaonty iray ao amin'ilay sehatra media sôsialyn izay ry zareo Indiàna no tompony. Nisoratra ihany koa ao amin'ny Koo ny sasantsasany amin'ireo tomponandraikitra ao amin'ny governemanta.
Ato ho ato ny Twitter sy ny governemanta nizeriàna dia mety hanomboka fifampiraharahàna hamahàna ilay olana. Raha tafita ilay fifampiraharahàna, marobe ireo Nizeriàna voadonan'ilay fampiatoana no ho afaka hisento tokana hahatsapa fa afa-doza.